Bioinformatics matihanina Job Adidy Template – JobDescriptionSample
Home / Famariparitana ny asa / Bioinformatics matihanina Job Adidy Template
Bioinformatics matihanina Job Adidy Template
superadmin Jona 18, 2016 Famariparitana ny asa Leave a comment 268 Views
Computer Systems mpandinika Job Adidy Sample
Jona 18, 2016
Jeografia Job Description Template
akanin-jaza Academics, Afa-tsy asa fampianarana manokana Adidy Template
Fitondran-tena fanadihadiana bioinformatics mampiasa fomba sy ny petra-kevitra ao amin'ny toerana ohatra zava-mahadomelina, kajy amin'ny solosaina, ny teknolojia ara-pitsaboana biolojia, proteomics biolojia . Mety Layout Nahazo rijan noho ny fandinihana sy ny fanodinana genomic vaovao, na fanazavana fanampiny organika sy Listings.
Tandremo abreast ny instrumentation, biochemistries vaovao, na ny rindrambaiko amin'ny alalan'ny fanatrehana fivoriambe izay matihanina sy mandinika fitaovana ara-pitsaboana.
Hanolotra firaketana an-tsoratra sy ny kajy amin'ny solosaina, fitaovana ho an'ny voajanahary-monina mikatsaka toy ny ohatra manaranaka fanadihadiana, ampy ny Gene-teny, ary tapa-kevitra ny asa Gene.
Mitarika ny asan'ny mpiasan'ny teknolojia vaovao sy ny fametrahana ny matihanina bioinformatics tanjona na fitaovana ao amin'ny toerana toy ny ohatra bioinformatics izay fitsaboana, transcriptomics, metabolomics, ary proteomics.
Mamokatra fandaharana vaovao solosaina na ampanjifaina amin'ny rindrambaiko hanome fahafaham-po manokana pitsaboana asa takiana.
Mamorona teti-dratsy sy ny angon-drakitra Listings.
Hiteraka na hanova fomba tranonkala mifototra bioinformatics.
Style sy hampiasa bioinformatics algorithms unsupervised ary araha-maso ao anatin'izany ny fianarana milina, fampandrosoana mavitrika, na tsary ny algorithms.
Hiteraka kajy amin'ny solosaina, fomba vaovao sy mitohy fomba as-takian'ny fikarohana tanjona.
Manangona Info mba ho ampiasaina amin'ny asa ohatra bioinformatics izay ara-drafitra sy Gene teny profiling.
Miresaka fikarohana tombontsoa amin'ny alalan'ny boky ara-pitsaboana, fivoriambe famelabelarana, na ny teny fikasana tatitra.
Misy endrika be mpampiasa, raharaham-barotra proteomic -genomic lisitra.
Jereo miaraka amin'ny mpandalina ny fikarohana olana, soso-kevitra teknolojia mifantoka valiny, na hanorina teknika izay kajy amin'ny solosaina,.
Fakafakao datasets lehibe toy ny ohatra genomic akora voajanahary andiany antontan-kevitra, ary ny tahirin-kevitra na tahirin-kevitra momba ny pitsaboana fototra fikarohana fiasan'ny.
Fahazoan-dalana hidirana asa mba hampitomboana.
Mitadiava torohevitra avy amin'ny fizarana toy ny ohatra ny fampiroboroboana, raharaham-barotra fampandrosoana, sy ny asa ny vokatra synchronize fampandrosoana na fandrosoana.
Miara-miasa mampiasa rindrambaiko rindrambaiko ao amin'ny fanovana sy ny fandrosoan'ny bioinformatics rindrambaiko izay raharaham-barotra.
Fanadinana bioinformatics fitaovana sy vaovao sy ny fampiharana.
Manao famintinana ny zava-misy momba ny olo-malaza ny olona genomes.
Lazao ny hafa ao anatin'ny karazany ary mampiasa ny fitaovana izay bioinformatics.
Ampitomboy tsirairay interface ny bioinformatics rindrambaiko sy ny Listings.
Job Mikatsaka Mila
Fahazoanao ny hevitr'izay vakinao-tena azony tsipika sy ho vonona amin'ny asa fehintsoratra antontan-taratasy mifandraika.
Active-mihaino-manome fanentanana manontolo ny zavatra hafa amin'izao fotoana izao hoe:, maka fotoana ho anao ny mandre ny zavatra namoronana, nanontany fanontaniana mety, ary tsy fanotofana amin'ny ohatra izay dratsy.
Namoaka-miresaka soa aman-tsara an-tsoratra tsy mba toy ny tsy mety ny fepetra takiana ny mpanatrika.
Miresaka-firesahana amin'ny hafa mba hizara vaovao effortlessly.
Matematika-Mampiasa matematika manamboatra olana.
Research-fampiasana vahaolana sy ny fitsipika ara-tsiansa ny manamboatra olana.
Critical-misaina-fampiasana antony sy fisainana mba hamantatra ny hery sy ny fatiantoka ny fomba, hanatsoaka hevitra na vahaolana amin'ny fahoriana hafa.
Active-Learning-ny fahafantarana ny vokatry ny fanazavana vaovao ho an'ny olana misy sy ny ho avy-hamaha fanapahan-kevitra sy ny.
Ny fianarana sy ny fomba-maka fampiharana ny fampianarana / fianarana sy ny fomba fomba mety ny olana, rehefa mianatra na Coaching zavatra izay vaovao.
Nanamarina-TrackingPEREvaluating fahombiazana ny tenanao, olona izay hafa, na orinasa mandray remedial asa na mba hiteraka fanatsarana.
Social fidirana-Ny hoe mahalala ny othersA valinteny sy ny fahazoana ny antony mamaly raha manao.
Fandrindrana-manova hetsika amin'ny resaka hafa’ fepetra.
Fandresen-dahatra-mahomby hafa manova fahazaran-dratsy na ny atidoha.
Fifampiraharahana-Mitondra ny hafa miaraka sy mitady ny hampihavana variances.
Manampy-Mampianatra ny hafa fotsiny ny fomba hanaovana ny hetsika.
Company Orientation-mavitrika mitady fomba mba hanampiana ny olona.
Advanced-manavaka famahana olana sarotra olana sy ny fikarohana tahirin-kevitra izay mifandray mampihatra safidy sy ny hampivelatra sy hijery voafantina.
Evaluation-Fandinihana raharaham-barotra sy ny entana mila mila manao famolavolana.
Engineering Design-Tsy sahirana fitaovana na niteraka sy ny teknolojia mba hiasa olona mila.
Gear Selection-hanapa-kevitra ny karazana fitaovana sy ny fitaovana ilaina mba hanao ny asa.
Andian-Manampy fandaharana, entana, tariby, na fitaovana hanome fahafaham-po fepetra arahana.
Coding-composant solosaina fangatahana fampiharana hafa.
Fanaraha-maso-ny fijerena asa fanampiny famantarana, kiboriny, na ny tondro mba ho azo antoka misy appliance miasa amin'izao fotoana izao araka ny tokony ho.
Dingana sy Control-Fisakanana ilay asa ny fitaovana na teknika.
Fitaovana Maintenance-manao fikojakojana izay fahazarana eo amin'ny fitaovana sy ny manapa-kevitra raha.
Fanamboarana-mamaritra izany ao ambadiky glitches izay fitantanana sy ny fifidianana toy 'zao momba izany.
Manamboatra-manamboatra modely na ny teknika mampiasa ny fomba manan-danja.
Quality-Control Research-Nanao fisafoana sy ny fanombanana ny entana, tolotra, na ny fomba fiasa mba hitsara ny fahombiazany na ny kalitao.
Ny fahendrena sy ny fandraisana fanapahan-kevitra-kevitra sy ny fandinihana ny fandaniana ankapobeny sy ny soa azo avy amin'ny zavatra mety mba hitadiavana ny anankiray izay tena mety.
Analysis-fanapahany hevitra ny karazana fandaharan'asa dia tokony hiasa sy marina ny fomba fanatsarana ny tontolo iainana, asa, ary koa ny toe-javatra mety hisy fiantraikany soa.
Fomba Evaluation-Famantarana dingana na tondro ny fampisehoana ary koa ny dingana nanana ilaina ny hanatsara na marina fampisehoana, mikasika ny tanjona ny fitaovana.
Time-Management-Fehezo ny fotoana ny hafa sy ny vanim-potoana iray ny.
Fanaraha-maso ny tahiry-mamaritra ny fomba karama ho ela dia lany mba hahazo ny asa vita, ary nampamoahana an'i fandaniana ireo.
Fitantanana Material Sources-Ny fiainana sy nahazo ny mety fampiasana ny endri-javatra, fitaovana, sy ny fitaovana ilaina mba hanao asa manokana.
Fanaraha-maso ny mpiasa Resources-Building, mampahery, ary mitarika ry namana satria miasa, famaritana tsara indrindra ny olona ho an'ny asa.
Training Fepetra Experience Fepetra
Over 2 taona, niakatra-to sy anisan'izany taona vitsivitsy
Career Control Skills Fepetra
fikirizana – 90.20%
Matter momba ny Hafa – 78.96%
Fahafehezan-tena – 85.71%
Pressure tokonam-baravarana – 84.11%
mendri-pitokisana – 92.37%
Tsara ny Details – 91.72%
Fampandrosoana – 92.97%
poto-fisainana – 97.00%
Tags Famariparitana ny asa
Teo aloha Green Mpandraharaha Job Description Sample
Manaraka Graders Ary Sorters, Fambolena Products Job Description / Fanendrena Ary Duty Sample
Professional fiarovana sy ny fiadana-miaina Techniciens Work Description Template
Plan, mandamina fiarovana drafitra, izay nitaky fandaharam-teknolojia sy ny famolavolana ny foto-kevitra, to stop or proper …